Ukupapashwa kwidijithali kuhlangana ne-ecommerce kunye neZmags Verge
yethu eCommerce umxhasi, iZmags, ikhuphe umbukeli omtsha wopapasho lwedijithali. Iverge ™ ivumela iinkampani ukuba ziguqule iiPDF zazo (kunye nomnye umxholo) zibe ngumbukeli apho zinokuthi zigqume khona idatha, imifanekiso, ividiyo, kunye neqonga labo le-ecommerce. Umbukeli unokusasazwa kwidesktop, iselfowuni kunye nethebhulethi ngeqonga lolawulo olulula.
Oku kukuqhubela phambili kupapasho lwedijithali, ukuvumela iinkampani ukuba zakhe amava asebenzisanayo kunye nokuzibandakanya apho banokuthengisa ngokuthe ngqo. Kwixesha elidlulileyo, inkampani yayihambisa amaphephancwadi ayo okanye incwadana kodwa kwakufuneka ixhomekeke kumfundi xa ebuyela kwivenkile ekwi-intanethi aze kuyithenga. Olu nxibelelwano lutsha luvumela inkampani ukuba yongeze indawo ekufumaneni ulwazi kunye nokuvumela ukuba bapakishe iimveliso ezininzi kunye.
Ukusuka kwiiZmags Yenza iphepha lemveliso
Umxholo ocebile ngamaphepha kunye nemifanekiso eguqukayo inokuphononongwa ngokuchanekileyo, kwabelwane ngayo kunye nokucofa ngokukhawuleza okanye ucofe usiwe kwi isikhoji sokuthenga, Konke ngaphandle kokufuna ukuphinda ulayishe iphepha okanye uhlaziye.
Yandisa amava omsebenzisi kuwo onke amaqonga ukusebenzisa ngokupheleleyo ukusebenza kwe-iPad HTML5, kunye nee-smartphones, iikhompyuter okanye iilaptops; inokubekwa kanye kwiphepha lakho lophawu lwe-Facebook.
Zmags kuphela Thenga i-Look Ukusebenza kuyonyusa ingeniso ngokuvumela abathengi babone zonke izinto nakweyiphi na into Amaqela emveliso, kwaye ukhangele kwaye uthenge izinto ngokukodwa okanye ngokudibeneyo.
Nantsi incwadana yemveliso yeVerge- kumbukeli. Qiniseka ukuba ucofa iqhosha lasekhohlo ukujonga isikrini esigcweleyo!
tags: Ukupapashwa kwedijithalieCommercekuthengwa kwi intanethipdfUlawulo lwepdf